नेपाली बजारमा उपलब्ध एफआई प्रविधियुक्त बाइक : कुन कति पानीमा ? - नागरिक खोज
२ हप्ता अगाडि • १०२ पटक पढिएको
एफआई प्रविधि भन्नाले साधारण भाषामा पेट्रोल कम खपत गर्ने प्रविधि भन्ने बुझिन्छ । एफआईको पूर्ण रुप फ्युल इन्जेक्सन हो । साधारण अर्थात कार्बुरेटर प्रविधि भन्दा भिन्न प्रकारको पेट्रोल सप्लाई गर्ने प्रविधिलाई एफआई भनेर बुझिन्छ ।
कार्बुरेटर प्रविधिमा पेट्रोल ट्यांकबाट सिधेै फ्युल ककको माध्यम प्लाष्टिकको पाइप भएर इन्जिनमा झर्ने गर्दछ । तर एफआई प्रविधिमा भने पेट्रोल ट्यांक भित्र एफआई मोटर्सको माध्यमबाट सिधै इन्जिनमा पेट्रोल पठाउने हुँदा पाइपबाट जाने प्रविधिले भन्दा कम खपतबाट इन्जिन स्टार्ट हुने गर्दछ ।
नेपाली बजारमा भित्रिएका एफआई प्रविधियुक्त मोटरसाइकलको कुरा गर्दा विगत १४/१५ बर्ष पहिलेको इतिहास सम्झिनु पर्छ । सन् २००७ मा टीभीएस अपाचे र पल्सर २२० सीसी बाइकमा एफआई प्रबिधि जडान गरिएका थिए । त्यस बखत माइलेजको मुल नारा बनाएर बिक्री भएका यी मोडलहरु उपभोक्ताको नजरमा राम्रा बन्न सकेनन् भने प्राविधिक त्रुटि धेरै देखिन थाल्यो ।
कार्बुरेटर प्रविधिका बाइकमा माइलेज कम भए तापनि बाटोमा रोकिने वा अचानक ठुलो मर्मत खर्च नआएकै कारण पनि विस्तारै बजारबाट ती २ मोडल पुनः कार्बुरेटर प्रविधिमा परिणत भएर आउन थाले । तर ती दुई मोडेलका बाइकबाट भारतीय कम्पनीका बाइकमा के एफआई प्रविधि सफल नभएकै हो त भन्ने कौतुहलता भने अहिले सम्म पनि मेटिएको छैन ।
अझै रोचक कुरा त पल्सर सिरिजमा त्यो समयमा लगभग सुपरफ्लप भएको २२० सीसी पल्सर नेकेड र फेयरिङ दुबै मोडल सन् २०११ मा परिमार्जित भएर डबल इन्जिन, डबल कलरको लुक्सकै कारण अपेक्षा गरे भन्दा धेरै बिक्री हुन सफल रह्यो ।
क्रमिक रुपमा सन् २००८ मा यामाहा कम्पनीले आफ्ना दुई मोडल बजारमा ल्याया, जस मध्ये एफजेड बाइकमा कार्बुरेटर प्रविधि नै जडान ग¥यो भने युवा लक्षित स्पोर्टी लुक्सको नयाँ बाइक (जसलाई आर१५ नाम दिइएको थियो) मा एफआई प्रविधि जडित भएर आयो । यो बाइकमा त्यति ठुलो समस्या देखा नपरेकै कारण यामाहालाई आफ्नो फोर स्ट्रोकमा बिग्रेको बजार सुधार्न नयाँ इट्टा थपियो ।
त्यसैगरी सन् २०१० मा तत्कालीन हिरोहोन्डाले आफनो स्पोर्टी सेगमेन्टको बाइक करिज्मा–आर लाई मोडिफिकेसन गरेर करिज्मा जेडएमआरको नाममा एफआई प्रविधि भएको २२९ सीसी क्षमताको नयाँ बाइक लन्च ग¥यो । तत्कालीन अवस्थामा उक्त बाइकको बिक्री राम्रै रह्यो भने २०११ मा उत्पादन भएर पनि नेपाल आउन सकेन ।
उक्त बाइकमा भने एफआई समस्या त्यति सार्हाे नदेखिएको कम्पनीको दाबी छ । पछि हिरो मोटोकर्प भइसके पछि सन् २०१६ मा पुनः करिज्मा आरकै नामबाट परिमार्जित जेडएमआर बजारमा आए पनि शाख धान्न सकेन । त्यस्तै हिरो मोटोकर्पले आफ्नो सानो सीसीको ग्ल्यामर बाइक १२५ सीसीमा पनि २०११ मा एफआई प्रविधि जडान गरेर बजारमा पठायो भने उक्त मोटरसाइकलमा कुनै प्राविधिक समस्या नदेखिए पनि नगन्य बिक्री भयो ।
यससँगै पुनः सन् २०१४ मा यामाहाले आफ्नो नेकेड भर्सनको एफजेड १५५ सीसीमा परिमार्जन गरि १४९ सीसी एफजेड एफआई भर्सन लन्च ग-यो भने यसले यामाहालाई आफ्नो बजार हिस्सा बढाउन निकै ठुलो सफलता प्राप्त भयो । हाल सम्म पनि एफजेड एफआई भर्सन नयाँ नयांँ कलर र भेरिएन्टका साथ बजारमा बिक्री भइरहेको छ । त्यसैगरी आर १५ को निरन्तरता भने २००८ देखि नै परिमार्जित रुपमा चलिरहेको छ ।
सन् २०१९ मा १५० सीसी सेग्मेन्टमा फेरि अर्काे जापनिज कम्पनी सुजुकी पनि एफआई विथ एबीएस प्रविधिका साथ नेपाली बजारमा प्रबेश ग¥यो । सुजुकीले जिक्सर १५० सीसीलाई नेपाली बजारमा उतारेको थियो । सन् २०१४ बाट उत्पादन सुरु भएको जिक्सर नेकेड भर्सन युवाले सबै भन्दा बढी रुचाएको र उपभोक्ता सन्तुष्टिमा अब्बल बाइक मानिन्छ ।
जिक्सर सिरिज पनि आफूलाई परिमार्जित गर्दै गर्दै गएर २०१९ बाट एफआई र एबीएसका साथ बजारमा भित्रिएको हो । सम्भवतः एबीएस प्रविधि सहितको उत्पादन गर्ने एसियामा पहिलो कम्पनीमा सुजुकी नै पर्दछ । हाल नेपाली बजारमा १५० सीसी सेग्मेन्टमा प्रविधि अनुसारको अब्बल बाइकको नाम लिनु पर्दा एफजेड १५० र जिक्सर १५० कै नाम लिन सकिन्छ ।
त्यसै गरि यामाहाकेै अर्काे नेकेड स्पोर्टी बाइक एमटी–१५ समेत २०१९ बाट बजारमा उपलब्ध छ तर मूल्य र पावरका कारण एमटी–१५ १५० सीसी सिरिजको लडाइँमा परेन । यसलाई युवा पुस्ताले रुचाए तापनि मूल्यका कारण सबैले खरिद गर्न नसकेको अनुमान सकिन्छ ।
त्यसैगरी पल्सर सिरिजको नयाँ नेकेड स्ट्रिट स्पोर्ट्स मोडलमा २०१२ बाट बजारमा बिक्री सुरु भएको बजाज पल्सर एनएस २०० सीसी क्षमताको बाइकको बिक्री कम भएकै कारण कम्पनीले परिमार्जित गर्दै लैजाने क्रममा सन् २०१९ मा आएर एफआई थप गरेर बजारमा ल्यायो । हाल एफआई विथ एबीएस प्रविधिमा समेत बिक्री वितरण गरिरहेको छ । बजाज पल्सर एनएस २०० को बिक्री बढ्नुको मुख्य कारण एफआई नभएर केटीएम ड्युकको मूल्य आकासिनु र पावर तथा लुक्स पनि हो ।
नेपालमा सर्बाधिक बिक्री हुँदै आएको ब्रान्ड होन्डाले हाल सम्म पनि २५० सीसी भन्दा तलका मोडलहरुमा एफआई प्रविधि जडान गरेर उत्पादन गर्न सकेको छैन । र, हरेक विकसित प्रविधिमा होन्डा पछाडि रहदै आएको छ ।
सन् २००६÷०७ देखि एफआई प्रविधिबाट टाढा बसेको टीभीएस भने अहिले सम्म पनि कार्बुरेटर प्रविधिमै रहेको छ । अकुला ३१० मा मात्रै एफआई प्रविधि जडान गरिएको छ भने अपाचे २०० आउने क्रममा छ । १६० सीसी अपाचे भारतमा राम्रो बिक्री भए पनि विगतको समस्याले हुन सक्छ हाल सम्म पनि अपाचे १६० सीसी सिरिजमा एफआई आउन सकेको छैन ।
माथि उल्लेखित १५० सीसी देखि २२९ सीसी सम्म नेपालमा भारतबाट आयातित मोटरसाइकलको विश्लेषण मात्रै गरिएको छ ।
आज प्रस्तुत भएको बजेटले के ल्यायो त ? हेर्नुहोस बुदागत